९ दिनमै कोरोना जितेका एसपीको हेर्नुहोस यो फर्मुला सबैले जानकारी लिनुहोस – Sudarshan Khabar
९ दिनमै कोरोना जितेका एसपीको हेर्नुहोस यो फर्मुला सबैले जानकारी लिनुहोस
स्याङ्जा जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) विमलराज कँडेल कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुने सबैभन्दा उच्च तहका प्रहरी अधिकृत हुन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार प्रहरी कर्मचारीमध्ये सबैभन्दा माथिल्लो तहका १ जना एसपीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । र, ती एकजना एसपी कँडेल नै हुन् ।
कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम कम गर्न अग्रपंतिमा खटिएर काम गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्दा गर्दै उनी आफैं संक्रमित बने । तर, संक्रमण भएको छोटो समयमै कोरोनालाई जित्न पनि सफल भए । साउन ६ गते स्याङ्जाका ३ जना प्रहरी (सुरक्षाकर्मी)मा कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि साउन ७ गते एसपी कँडेलको पनि स्वाब संकलन गरिएको थियो ।
स्वाब परीक्षण नतिजा उनले अपेक्षा गरेअनुसार थिएन्, अर्थात् उनमा कोरोना पोजेटिभ देखियो । साउन १२ गते आएको रिपोर्टअनुसार उनमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । उनीसहित अन्य ४० जना सुरक्षाकर्मीमा पनि कोरोनाको संक्रमण देखिएको थियो । संक्रमण पुष्टि हुनु पहिले नै स्वास्थ्यप्रति सचेत रहेका कँडेलले कोरोनाको संक्रमण जित्न थप सावधानी अपनाए ।
सरकारी आवास (क्वार्टर)मै आइसोलेसनमा बसेका कँडेलले ९ दिनमा नै कोरोना जितेका छन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय स्याङ्जाका प्रमुख यामप्रासद शर्माका अनुसार संक्रमण पुष्टि भएको नवौं दिनपछि गरिएको परीक्षण रिपोर्टमा कँडेलमा कोरोना नेगेटिभ देखिएको छ । एसपी कँडेलसँगै अन्य २ जना संक्रमितको पनि रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हो ।
अन्य सङक्रमितमा लामो समयसम्म कोरोना पोजिटिभ देखिरहँदा आफ्नो सर्तकताले चाँडै निको भएको एसपी कँडेलको विश्वास छ । आइसोलेसनमा बसेको समयामा २ गिलास पानीमा रातभर गुर्जो भिजाएर बिहान तताइ एक गिलास मात्रै बनाएर हरेक दिन पिउने गरेको कँडेलले सुनाए । गुर्जोसँगै अस्वगन्धा, तुसली, बोझो खाएको र दिनको डेढ घण्टा शारीरिक व्यायाम गरेको सुनाउँछन ।
संक्रमण पुष्टि भएपछि माछा मासु नखाएको उनले सुनाए । बेसार, कागती, अदुवा पनि कोरोना जित्ने प्रयत्नमा थप सहयोगी बनेको उनको भनाइ छ । संक्रमण पुष्टि नवौँ दिनमा रिपोर्ट नेगेटिभ आए पनि समग्रमा पहिलो स्वाब लिएको चौध दिनमा दोस्रो पटक परीक्षण गरिएको उनले बताए । कोरोना सङक्रमणको बेला सञ्चार सेट र मोबाइल फोनबाट ड्युटी गरेका एसपी कँडेलले अब भने भौतिक रुपमै काममा फर्कने बताए ।
गोरखापत्रका लागि अर्जुन काफ्लेले लेखेको समाचारको सहयोगमा तयार पारिएको सामग्री
प्रकाशित भएको : August 9th, 2020
सिद्दबाबा जालन त जेल ? के भयो…
रुघा /खोकी ज्वोरो आयो ? कस्तो अबस्थामा…
अबको तिन दिन हिमपातको सम्भावना सतर्क रहन…
तीन जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु ,
शरीरमा आउने अनावश्यक रौंलार्ई कसरी नियन्त्रण गर्ने…
खुसीकाे खबर : एक महिनामै आउन सक्छ…